By Tahiil Manager
Riyada guryaha ayaa mararka qaar ku dhamaan karta sida riyooyinka, laakiin la talinta saxda ah iyo baaritaan yar iyo dulqaad, waxaad yareyn kartaa halista iibsiga illaa eber.
Dhammaantood waxay ku bilaabmayaan wakhti si aad u weydiiso su’aalaha saxda ah ee La-Taliyahaaga Iibinta, iyo inaad ka warqabto halka laga helayo dhammaan macluumaadka saxda ah ee ku siin doona aragti dhammaystiran, 360 darajo oo ku saabsan hantida.
Macluumaadka yareynta halista ee aad raadineyso qiyaastii wuxuu u qaybiyaa afar qaybood. (Fadlan la soco: Maqaalkani sinnaba ugama jeedo inuu noqdo liistada dhammeystiran, laakiin wuxuu si fudud talo ugu yahay iibsadayaasha guryaha).
Waxyaabaha suuragal ka dhigaya inay qiimahooda hoos u dhigaan guriga
Haddii aad kormeertay guriga dhammaadka usbuuca, la soco in nabadda iyo xasilloonida aad kuu cajabisay ay noqon karto mid aan jirin inta lagu jiro usbuuca.
Waxaa jiri kara deris isku dhac ah, eeyaha qeylinaya, ama dhawaqa warshadaha oo u dhow, ama laga yaabee inay tahay warshad maxalli ah oo soo saarta ur aan fiicnayn inta lagu jiro maalmaha shaqada. Fursadaha ayaa ah waxaad ogaan doontaa tan haddii aad booqato guriga waqtiyada kale.
Soohdimaha dhulku waxay u ekaayeen kuwo muuqda, laakiin waxaa jiri kara dhul-fudayd ama dhul taaj oo soohdinta qaybiya si wax ku ool u yareeya cabirka hantidaada sida ay u muuqato.
Raadinta cinwaanka waxaa laga heli karaa hay’adaha Dowladda, taas oo kuu sheegi doonta sida saxda ah ee aad ku hesho lacagtaada marka la eego cabirka dhulka, iyo halka aad ka dhisi karto wixii kordhin ah si nabadgelyo iyo sharci ah.
La soco in wax kasta oo aad ku aragto guriga gudihiisa aan lagu dari doonin. Mararka qaarkood, iibiyeyaashu waxay u qoondeyn karaan wax gudaha ah “chattel” oo ay damacsan yihiin inay la qaataan ka dib iibka. Weydii La-Taliyahaaga Savannah Sales Sales nuqul ka mid ah kaydka sheeko-wadaagga.
Farqiga udhaxeeya kulanka (waa inuu sharci ahaan guriga lajoogo) iyo sheekeysiga wuxuu noqon karaa aag cirro leh, qaar ka mid ah kuwa wax iibsan karaana waxay aadaan ilaa xad ay ka qaadayaan sawir dhamaan sheekooyinka la soo sheegay.
Tusaale ahaan, nidaamka kaydinta ee garaashka, ama xitaa qalabka dhawaaqa ee isku dhafan ayaa loo kala saari karaa sheeko-yaqaanno haddii loo arko inaysan si joogto ah guriga ugu xirnayn oo ay ku qoran yihiin heshiiska iibka.
← Gurigaagu diyaar ma u yahay iib?